Operations Manager - Premium Support (X), Western Cape - Careers24
Operations Manager - Premium Support (X) - Amazon Development Centre SA (Pty) Ltd, Western Cape
Sectors: IT, Management, Internet
Posted by Amazon Development Centre SA (Pty) Ltd on Monday, May 6, 2019
Apply before Friday, July 5, 2019 - 17 Days left
Amazon yinkokheli kwihlabathi kubuchwepheshe kunye neenkonzo ezinxulumene neWebhu. Ngoku, kunye ne-Amazon Web Services (AWS), inkqenkqeza phambili kubuchwepheshe be-Cloud, inceda abantu kunye namashishini athathe iziseko ezingundoqo zekhompyutha zawo kunye nosetyenziso (app) ziye “eMafini”.
I-AWS Support ibonelela ngenkxaso yobuchwephesha behlabathi kuthotho lwabathengi bangaphandle njengoko besakha usetyenziso (apps) kumsebenzi obalulekileyo wokongeza ngaphezulu kwiinkonzo ze-AWS ezifana ne-Amazon S3 kunye ne-Amazon EC2. Sineqela leenjineli ezinetalente ezizinze kwiindawo eziliqela kwihlabathi.
Sikhangela uMlawuli weMisebenzi onezakhono zobuchule bokusebenza kunye nezobunkokheli kubuchwepheshe ukuze ongamele iqela leenjineli ezixhasayo ezikwiqondo eliphezulu lobuchwepheshe. Njengelungu leqela le-AWS Support, uza kusebenzisana nazo zonke iinkonzo ze-AWS ukuze uzise awona mava afanelekileyo kubathengi kangangoko unakho. Uza kungqongwa ngabantu abakrelekrele abanothando olungazenzisiyo lo[phinyephinye kwezekhompyutha (cloud computing) nabakholelwa ukuba eyona nkxaso ephezulu kwihlabathi ibalulekile kwimpumelelo yomthengi.
Iqela lakho liza kuphendula imibuzo engobuchwepheshe evela kubathengi abafuna uncedo ngokusebenzisa iinkonzo ze-AWS. Uza kusebenza ngqo namaqela eenjineli zakwa-AWS ukuqinisekisa ukuba siphathela umthengi amava esisombululo esikhawulezayo nesikumgangatho ophezulu. Uza kubandakanyeka ekulawuleni amaqela ehlabathi, uphembelela intsebenziswa phakathi kweziza, kwaye ukhokela ekwenzeni izinto ezintsha kwiqela lakho. Ukongeza koku, uza kuqhuba unxibelelwano lwabathengi ngexesha lemisitho ebalulekileyo ye-AWS.
NjengoMlawuli weMisebenzi, uza kwenza okuninzi ngaphezulu kokulawula iqela labasebenzi. Uza kulawula iqela elakha izinto ezisebenza ngokuzenzekelayo kunye neenkonzo ezenza ukusebenza kweziseko ezingundoqo ezininzi kucace kwaye kube lula, kwaye amava omthengi ukususela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni aza kuba luxanduva lwakho kunye nokuhambisa iimfuneko zokuphucula ukusebenza kweenkonzo, umgangatho wokuziswa kwazo kunye nokuthembeka.
Oyena mgqatswa ofezekileyo uza kukhangeleka ngolu hlobo…
Wonwabela ukuba ngumlawuli ogqwesileyo wabantu . Ukwakha, ukukhuthaza kunye nokucebisa uqeqesha iqela elixhasayo leenjineli elikumgangatho wehlabathi yeyona nxalenye ibalulekileyo yale ndima. Kufuneka ube nomzila olandelekayo wokukhangela uqeshe abasebenzi nokugcina italente ephezulu kwaye ugqwese kwimisebenzi yemihla ngemihla yolawulo lwabantu nomsebenzi.
Uyayazi i-Linux, ubuchwepheshe boqhagamshelwano beenkqubo zekhompyutha & nobunye ubuchwepheshe. Oyena mgqatswa ofezekileyo uza kuba namava okusebenza neqela elijongene neziseko ezingundoqo. Kusekwafuneka abe nolwazi nobuchule bokusebenzisa i-Linux, kunye/okanye u-Windows. Uza konwabela ukugcina izakhono zakhe zobuchwepheshe zizezale mihla, kangangokuba angakwazi nokuba negalelo kwiingxoxo zobuchwepheshe bokwakha. Rhoqo uthatha inxaxheba kumsebenzi wokukhangela nzulu iingcambu zomonakalo ukuze aqhube uhlalutyo ngobuchwepheshe lweengcambu zomonakalo kwimiba entsokothileyo.
Unamava obuchule bolawulo lweeprojekthi & nemveliso. Umgqatswa ophumeleleyo uza konwabela ukucacisa eyona miba ephambili yeprojekthi. Oku kuza kuquka ukunceda ekwenzeni izinto zibe ntsha kunye nokuvelisa iinkonzo ezintsha ezinyusa ixabiso zisambathisa iinkonzo zethu ezikhoyo. Uza kudinga izakhono ezigqwesileyo zolawulo lweeprojekthi zobuchwepheshe ukuzisa izinto ezingumkhombandlela wemveliso kwakunye nezinye iiprojekthi zamanye amaqela asebenzisana nawo. Amava eendlela zokusebenzisa i-Agile aluncedo.
Uyawazi ukuba uqhutywa njani umsebenzi omiselweyo, ongenankcitho, nohamba kakuhle. Umgqatswa ofanelekileyo uza kufuna ukulinganisa aze axele yonke into kwaye ajolise ngokukhutheleyo kwingcombolo. Uza kugqwesa ekusebenziseni izibalo zokulinganisa, ongamele kwaye abe ukuqhelile ukulinganisa nokuphucula iinkqubo zokusebenza nomsebenzi weqela lakhe.
Konwatyelwa kakhulu ukusebenza naye. Umgqatswa ofanelekileyo uza kuyithanda into ayenzayo kwaye abe nethuku lokwenza ukuba umsebenzi wonwatyelwe.
support : 6 to 7 years
• 6+ iminyaka yamava olawulo lwamaqela obuchwepheshe kunye namava aqaphelekayo olawulo lwabasebenzi kunye nemizekelo yokuphuhlisa iinjineli kunye nokwakha amaqela anempumelelo.
• Ubuchwepheshe obukumgangatho ophezulu kunye nezakhono zokuhlalutya; ubuchule bokuqwalasela ukugqwesa emsebenzini kunye nolawulo olukumgangatho ophezulu.
• Akhuthalele ukuqwalasela iingcombolo nenkqubo yokulinganisa (Data and metrics), eqwalasela zombini umgangatho nobungakanani.
• Imvelaphi yobuchule bokuhlalutya, ukukhululeka kwiimeko ezingacacanga okanye ezintsingiselo-mbini.
• Izakhono zobuchule bonxibelelwano ngokuthetha kunye nokubhaliweyo; akwazi ukubhala izindululo zoshishini eziyimpumelelo nezikumgangatho ophezulu
Ezona ziqinisekiso zemfundo zifunwayo nezikhethwayo
• Umbono wobuchule beshishini, womsebenzi kunye nobuchwepheshe. Ube nempumelelo usebenza kwimida enqamlezayo yeshishini, uhlanganisa abantu abanezimvo ezahlukileyo kunye namava angafaniyo ukuze kufunyanwe izisombululo.
• Amava okuqhuba umsebenzi obalulekileyo weenkonzo zekhompyutha. Amava okusebenza kwindawo esebenzisa i-intanethi, kuquka amaziko amaninzi eengcombolo kunye nawawaka-waka eeseva. Experience operating mission-critical online services.
• Amava okulawula unxibelelwano ngobuchwepheshe bekhompyutha (IT) egameni labathengi.
• Amava njengomphathi weenkqubo okanye njengenjineli yophuhliso lweenkqubo zekhompyutha. Amava okusebenzisa iinkonzo zeWebhu, ulawulo lweenkqubo zekhompyutha (Linux kunye/okanye Windows), Networking, Java, Perl, Ruby kunye ne-Python.
• Ishishini i-Amazon Web Services lifuna ukucinga ngokwenza izinto ezintsha kulinganiswe ngolungelelaniso nokuqwalasela ngobuchule abathengi kunye nomgangatho ophezulu. Le nkokheli kuza kufuneka ibe nomzila wokuphumeza olo lungelelaniso.
• Isidanga kwiNzululwazi yeeKhompyutha, ubuNjineli, iZibalo (Computer Science, Engineering, Mathematics) okanye izifundo ezinxulumene nazo.
I-Amazon ngumqeshi wamathuba alinganayo, kwaye siluxabisile uthando lwakho olungazenzisiyo lokufumanisa izinto ezintsha, lokwenza izinto ezintsha, lokwenza lula kunye nokwakha. Siyazamkela izicelo ezivela kuwo onke amalungu oluntu ngokungakhathaleli budala, i sini, kukhubazeka, okukhethayo kwezesondo, ubuhlanga, inkolo okanye inkolelo. I-Amazon izinikele ngamandla kukwahlukahlukana kunye nokuLingana kwamathuba eNgqesho emsebenzini kunye nokwahlukahlukana okungaphezulu kwezimvo. Ngokuphathelele koku, imithetho efanelekileyo kunye nemithethosiseko enxulumene nokuLingana kwamathuba eNgqesho iza kuthathelwa ingqalelo xa kuqeshwa/kunyulwa abagqatswa abanokuqeshwa. Sinyanzeliswa ngumthetho ukuba siqinisekise ukuba ungakwazi ukusebenza eMzantsi Afrika ngokusemthethweni. I-Amazon ifuna ukuba ufake ikopi yesazisi sakho okanye yencwadi yokundwendwela kunye nayo nayiphina imvume yokuphangela enokusetyenziswa ukuba ungummi ovela kwelinye ilizwe, kunye nesivi ehlaziyiweyo.
Apply before Friday, July 5, 2019 - 17 Days left Companies may expire jobs at their own discretion. If you have not received a response within two weeks, your application was most likely unsuccessful.
Related Operations Manager - Premium Support (X) jobs in Western Cape